WARBIXIN: Xaalada Costa iyo Chelsea oo meel xun mareysa – Gool FM
WARBIXIN: Xaalada Costa iyo Chelsea oo meel xun mareysa
Byare August 15, 2017
(London) 15 Agoosto 2017. Diego Costa ayaa lagu amray inuu dib ugu soo laabto Chelsea iyadoo ay kooxdu ka biyo diidsan tahay in Atletico Madrid qiimo jaban kula wareegto xiddiga reer Spain.
Waxaa daaha laga rogay in Chelsea ay ganaax lacageed dul dhigtay Costa kaddib markii uu dib ugu soo laaban waayay tababarka kooxda maadaama usbuuc fasax dheeri ah la siiyay bilowga kulamada la isugu diyaarinayay kal ciyaareedka cusub.
Laacibka asal ahaanta ka soo jeeda Brazil ayaa la wariyay inuu diyaarinayay inuu sanadka oo idil ku soo laaban Ingiriiska isla markaana uu iska joogo Brazil xitaa iyadoon wax mushaar ah la siineyn ilaamaa loo ogolaado inuu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Atletico Madrid.
Yeelkeede, Chelsea ayaa iminka filaneysa inuu dib u soo laabto Costa isla markaana uu oofiyo qodobada ku xusan heshiiska ugu harsan kooxda sida inuu la qaato tababarka iyo wax kasta oo kale uu taam ugu noqon karo in la xusho.
Chelsea waxay diiday wararka sheegaya in Costa lagu wargaliyay inuu tababarka la qaadan doono safka labaad ee kooxda haddii uu dib ugu soo laabto tababarka, inkastoo aysan marna u badneyn inuu markale u ciyaari doono tababare Conte oo isagu kal hore af cad ku sheegay inuusan ku jirin qorshihiisa kal ciyaareedka cusub.
Blues ayaa afar waxyabood hor dhigtay Costa ka hor inta aysan ka iibin Atletico Madrid:
Inuu marka hore soo xaadiro xerada Cobham.
Inuu dib ugu soo laabto tababarka.
Inuu caddeeyo inuu taam u yahay kulamada.
Iyo inuu isa soo taago booska loogu xulan safka hore.
Waxaa kaloo la warinaya inay Chelsea ku sii wadi doonto ganaaxa lacageed ilaa uu dib ugu soo laabto tababarka.
Eden Hazard iyo Tiemoue Bakayoko oo dib ugu soo laabtay tababarka buuxa ee Chelsea (SAWIRRO)
Messi oo isku dayay in Neymar uu ku celiyo Barcelona iyo balan qaadkii uu u sameeyay oo daaha laga rogay